DAAWO Sawirada:Sidii 18 May looga xusay magaaladda Birmingham UK iyo Calanka Somaliland oo laga taagay golaha degaanka ee Birmingham. |
DAAWO Sawirada:Sidii 18 May looga xusay magaaladda Birmingham UK iyo Calanka Somaliland oo laga taagay golaha degaanka ee Birmingham.
Halkan ka Daawo Sida 18 May looga xusay magaaladda Birmingham UK iyo Calanka Somaliland oo laga taagay golaha degaanka ee Birmingham.
Waxa shalay oo ku beegnayd 18 May maalinta Somaliland ayaa si weyn looga xusay dalalka aduunka oo dhan,balse magaaladda Birmingham oo ah caasimadda Labaad ee dalkan Ingiriiska waxa looga dabaal-degay si ka duwan sida magaalooyinka kale looga dabaal-degay.
Waxa golaha degaanka Birmingham laga taagay calanka Soomaaliland,Waxaana kasoo qayb galay shacab badan oo ka socday magaalooyin ku xeeran birmingham.Aqoonyahan reer Soomaaliland ah oo degan magaaladda Birmingham ayaa qayb weyn ka qaatay hir-galinta munaasibadan.
Cabdirisaaq Mecaad oo ka mid ah aqoonyahanada reer Somaliland ee degan Birmingham ayaa ahaa muwaadinkii ka danbeeyey in golaha degaanka laga taago calanka Somalilad,waxaanu aad ugu mahad celiyey dhamaan shacabkii kasoo xaadiray madasha ay ka dhacday.Waxa isna qayb weyn ka qaatay aqoonayahan Khaliif Xiinwaal.
Dadkii kasoo qayb galay waxa ka mid ahaa Hibaaq jaamac oo ah xildhibaanad kasoo jeeda Somaliland lagana soo doorto golaha degaanka Bristol dedaal badana u gashay in golaha degaanka Birmingham ay ku dhiiradaan in ay aqoonsadaan Soomaaliland, waxa kale oo ay Hibaaq ka danbeysay in ay golaha degaanka Bristol ka dhaadhiciso sidasoo kale .
Waxa kale oo kasoo qayb galay xafladii calanka lagu saarayey qaar ka mid ah shacabka reer Soomaaliland iyo xildhibaano laga soo doorto magaaladda Birmingham. Waxay ahayd kal hore markii golaha degaanka Shaffield iyo Bristol ay aqoonsadeen Somaliland,tanina waxa ay tahay horumar lagu talaabsaday.